नेपालमा एउटा प्रहरीको कुकुरले पनि पत्ता लगाउन नसकेको यो घट्ना ! – Nep Stok
माघ ११, २०७८ मंगलबार 132
तीन सातादेखि सम्पर्कविहीन धनकुटा नगरपालिका-४ छारागाँउकी ५२ वर्षीया सीता श्रेष्ठको शव घरभित्र पु’रेको अवस्थामा फेला परेको छ।
गत पुस १६ गतेदेखि सम्पर्कविहीन उनको शव ह’ ‘त्या गरी पु’रेको अवस्थामा घरभित्र सोमबार फेला परेको छ। भुइँतलामा पु’रे’को अवस्थामा फेला परेको उनको शरीरमा चो’ ‘ट रहेको र श’व ग’ले’को अवस्थामा भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी सुरज कार्कीले जानकारी दिए। सीता हराएको भनेर पुस २१ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी परेको कार्कीले जानकारी दिए।
उजुरीपछि प्रहरीले कुकुर परिचालन गरेर खोज तलास गरे पनि फेला पार्न सकेको थिएन। लामो समयसम्म घटनाको विषयमा प्रहरीले केही पत्ता लगाउन नसक्दा प्रहरी चु’केको स्थानीयको आरोप थियो।
सीताको ह’ ‘त्या घरायसी वि’वा’दको क्रममा उनका श्रीमान ५२ वर्षीय सीताराम भनिने सीताकुमार श्रेष्ठले गरेको खुल्न आएको डिएसपी कार्कीले बताए। श्रीमतीको ह’ ‘त्या गरी घरभित्र श’व पु’रे’र फ’रा’र रहेका सीतारामलाई आइतबार ललितपुरबाट पक्राउ गरी धनकुटा ल्याइएको प्रहरीले जनाएको छ।
घटनाको थप अनुसन्धान गरी क’र्त’व्य ज्या’न शी’र्ष’कमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ताको तयारी गरेको प्रहरीले जनाएको छ। श’व पो’ष्टमा’र्टमका लागि सोमबार नै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान पठाउने तयारी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यलय धनकुटाले जनाएको जनाएको छ।
Prevलहै-लहैमा लागेर अनलाईनवाट डलर कमाउने सोँचमा त हुनुहुन्न ? यस्तै कारवाहीमा पर्नुहोला
Nextसाँच्चै ओमिक्रोन भेरियन्टसँगै महामारी समाप्त हुँदैछ?
नेपाली मूलका भारतीय अभिनेता डेनीका छोरा रिनजिङ डेङजोपा बलिउडमा डेब्यु गर्दै
बिहानै शो’कमा डुब्यो संखुवासभा, एकैदिन यति धेरैको मृ’त्यु , उ’द्धारका लागि हेलिको’प्टर जाँदै.